Imiphumo yezobuqu | Umvuzo weZiseko
Ikhaya impilo Iziphumo zomzimba zoTyhutho
Abantu abaninzi abancinci babona iphonografi njengendlela yokwenza isikhokelo, umthombo weengcinga malunga nehlabathi lesini sabantu abadala. Ngelishwa iisayithi ze-porn azizisi zilumkiso malunga nomngcipheko okanye ukwenzakala. Bayazibhengeza njengononophelo kunye nokuzonwabisa okungapheliyo. Njengazo zonke izinto ezinokubakho kunye nokuziphatha, iphonografi inokubangela utshintsho olukhulu kwingqondo ngokuhamba kwexesha kwaye ikhuthaze indlela yokuziphatha eyenzakalisa amanye amalungu omzimba. Ukungakhawulezi okubulala umntu okanye 'umdlalo womoya' njengoko imboni ye-porn ikubiza ngokuba yi-euphemistically, ngomnye umzekelo onje ngokuxhaphakileyo namhlanje. Bona oku blog kuyo.
Olona tshintsho loyikisayo luchazwe ngamadoda, ngakumbi amadoda aphantsi kwe-40 namhlanje kwiindawo ezininzi zokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kukungasebenzi kakuhle kwe-erectile (ED). Oko kukuthi, abanakho ukufikelela kwilungu lobudoda okanye elomileyo. Yabona le ntetho kwi-ED ukuqonda isizathu. Kwabanye, ukubambezeleka kokubambezeleka okanye impendulo edangeleyo kumaqabane okwenyani kuyinto eqhelekileyo. QAPHELA ukuba abanamava e-ED xa besebenzisa iphonografi, kuphela xa bezama ukulala kunye neqabane lokwenyani. Oko kuthetha ukuba amadoda amaninzi ngaphandle kwamaqabane awaqondi nokuba avelise ingxaki ye-erectile.
Njengoko iYunivesithi yaseCambridge iphambili umphandi uValerie Voon wathi:
Oku kunokubangela iingxaki ezinkulu xa isibini sihlangana. Nokuba leliphi iqabane linokuziva lingonelanga ngenxa yokungakwazi ukwenza isondo okanye ukubonakala ngathi lingenakho ukubhenela umnqweno wesini komnye umntu. Kubangele ukuba amadoda amaninzi abe neentloni kwaye abe neentloni kwaye akhathazeke okanye azive esilele kumaqabane abo.
Bona oku kuhle inqaku Ukusuka kwi-Guardian ebizwa ngokuba "Ngaba amanyala enza ukuba abantu abancinci bangenamandla?"
Umzekelo, omnye umfana osuka kwindawo yesiko wayezigcine eyintombi enyulu de umtshato wakhe wasebenzisa imifanekiso engamanyala. Xa yena nenkosikazi yakhe bazama ukuqhawula umtshato, akazange akwazi ukulala naye. Oku kwahlala kunjalo kwiminyaka emibini njengoko wayengadibanisi ukusebenzisa kwakhe i-porn kwimpembelelo yesini. Okwangoku umfazi wakhe wathi ufuna uqhawulo mtshato. Kungelo xesha kuphela apho lafumana umfana uGary Wilson's Intetho yeTEDx, Ngaba wafumanisa ukuba ukusetyenziswa gwenxa kwe-porn kungakhokelela ekusileleni kwe-erectile. Siyathemba ukuba inkosikazi yakhe yamisa inkqubo yoqhawulo mtshato nanjengoko le iyinyango. Mingaphi imitshato kunye nolwalamano oluchaphazelekayo kwi-intanethi?
Iindaba ezimnandi zezokuba xa amadoda eyeka i-intanethi okwexeshana, umsebenzi wawo we-erectile unokuphinda ubuyiselwe. Kungathatha iinyanga okanye iminyaka kwezinye iimeko zeenkani. Ngokumangalisayo, kuthatha abafana abancinci ixesha elininzi ukubuyisa i "mojo" yabo kunamadoda amadala. Kungenxa yokuba amadoda amadala aqala imisebenzi yabo yokuphulula amalungu esini kunye neemagazini kunye neefilimu kunye nokuvezwa kwabo kwi-porn bekungaqhelekanga kwaye kuzinzile ngokwaneleyo ukwenza inzulu imeko yesondo kunye neendlela zokubukela i-intanethi yevidiyo ye-porn idala. Amadoda abancinci abasebenzisa i-pornography kunye nokuphonyana ndawonye ixesha elide kunokuba basebenzise iingcamango zabo, indlela endala.
Nazi ezinye iziphumo zophando:
• I-Italy 2013: iminyaka eyi-17-40, izigulane ezincinci zincinci zine-Erectile Dysfunction (49%) kunezikhulile (40%) Uvavanyo olupheleleyo lufumaneka Apha.
• I-USA 2014: iminyaka eyi-16-21, i-54% iingxaki zesini; I-27% I-Erectile Dysfunction; I-24% iingxaki nge-orgasm. Isishwankathelo sophando lufumaneka Apha.
• I-UK 2013: i-5 yabafana abaneminyaka eyi-16-20 baxelele iYunivesithi yaseMpuma yeLondon "babexhomekeke kwi-pornography njengento evuselela isondo sangempela" Inqaku elipapashwe kule nto lifumaneka Apha.
• Kwi University of Cambridge Ukufunda kwi-2014, iminyaka yobudala be-25, kodwa i-11 ngaphandle kwe-19 yathi ukusetyenziswa koonobumba kubangele i-ED / ukunciphisa i-libido kunye nabalingani, kodwa kungekhona ngoononophala.
I-Porn iyakuthonya amandla ombonakalo kumzimba wesini
Emva kwamashumi eminyaka ukuphuculwa kobudlelwane bamandla phakathi kwamadoda nabasetyhini, kuninzi kobungqina bamva nje bokuba amanye amadoda aya esiba namandla kwaye enoburharha, ngakumbi kubudlelwane bezesondo. Le ndlela yokuziphatha engathandekiyo ibonakala iqhutywa kwinqanaba elithile ngokusetyenziswa kwamadoda kwi-intanethi.
A Ucwaningo lwe-2010 kwimixholo yeDVD edibeneyo ifunyenwe ukuba i-304 ihlaziywe, i-88.2% iqulethe ukukhwabanisa, ngokukhawuleza, ukuxubha, nokubetha, ngelixa i-48.7% yeembonkco ziqukumbela ngomlomo, ngokukodwa ukubiza igama. Abenzi bokuhlaselwa babedla ngokuba besilisa, kanti iithagethi zobudlova babengumfazi onzima. Iithagethi zihlala zikholisa okanye ziphendule ngokungathintanga.
Ukwakhiwa kwesi sifundo kuqhutywe isifundo seJamani esandul 'esandul' esandul 'ukufumana ukuba amadoda asebenze kwizona ziphezulu kunye ngesondo Ukuziphatha okunyanzelisayo kwakukho abo babesoloko bechitha iifoto zoonografi kwaye bahlala betywala ngaphambili okanye ngexesha lesini.
le isifundo kuvavanywe umdla wamadoda angamaJamani abelana ngesondo kunye nokuzibandakanya kwiindlela ezahlukeneyo zokuziphatha eziqwalaselwe kuhlalutyo lwamva nje lwephonografi. Umdla wokubukela imifanekiso bhanyabhanya ethandwayo okanye ukusetyenziswa gwenxa kweefografi kunxulunyaniswa nomnqweno wamadoda wokuzibandakanya okanye sele ebandakanyekile ekuziphatheni njengokutsala iinwele, ukubetha iqabane lakho ngokwaneleyo ukushiya uphawu, ukuphuma ebusweni, ukuvalelwa, ukungena kabini ( okt ukungena kwi-anus okanye kwilungu lobufazi leqabane lakho ngaxeshanye nenye indoda), i-ass-to-mouth (okt ukungenisa ngaphakathi iqabane emva koko ufake ilungu lobudoda ngqo emlonyeni wakhe), ukugoba i-penile, ukubetha ebusweni, ukukrwitsha kunye nokubiza amagama (umz. isileyi ”okanye“ isifebe ”). Ngokuhambelana nophando olwenziweyo lokuvavanya kwisiphumo sotywala kunye nokubonisa iphonografi kumathuba okuba amadoda anyanzeliswe ngokwesini, amadoda awayeziphatha gwenxa kakhulu ngabo babesoloko besebenzisa iphonografi kwaye babesela rhoqo utywala ngaphambi okanye ngexesha lokwabelana ngesondo.
Ubundlobongela bezesondo kunye nezinye izinto ezinobundlobongela bezesondo
Kukho ubungqina obuninzi bokuthi i-pornography yenziwa ukuba ibonise imisebenzi ekhangeleka kakhulu, njengento yesondo yomlomo, ukungena kwe-double or facial ejaculations. Nangona kunjalo abaqhubi bahlawulelwa okanye baqhutyelwa ukwenza izinto abangaqhelekanga ngokuzikhethela. Uninzi lweenkwenkwezi zeentlobo zeentlobo zesini ziye zagqithiswa ngokwesini kwi-industry ye-pornography.
I-intanethi ye-intanethi ngokuqhelekileyo iyenziwa kwimeko engavumelekanga. Ngokuqhelekileyo ibonisa imisebenzi enokuba yingozi kwimpilo. Ngokomzekelo kukho ukusetyenziswa okubanzi "kokungabikho komzimba," kungukulala ngesondo, ngokuqhelekileyo ngesondo esilumkileyo, ngaphandle kweikhondom. Ukusetyenziswa kweikhondom kwenza ukuba ubulili buboniswe bubonakale buncinci kwaye bunempembelelo ephantsi. Ngokuzikhusela iikhondom abenzi boononophala bangabonakalisa ukutshintshisana kwamanzi omzimba, bafaka 'ubulili obushushu kakhulu' kwaye bakubonise okukhethwa kukho okukhethwa kancinci kubomi bakho bobulili.
Iingcali zempilo zonyango kunye nezocansi zincoma ukuba onke amaqabane amasha acingwe ngqalelo oko ayenayo-imithombo enokufumaneka kwezifo ezithathelwana ngocansi (STIs), kuquka ne-HIV / AIDS. Ukuzibandakanya ngesondo kunye nomlingani wokwenene kuyinto enobungozi yokwenza. Kuye kuwe kunye neqabane lakho ukulawula izinga lomngcipheko.
<< Iziphumo zengqondo Uxinzelelo >>